Miahiahy ny mpiserasera fa natao hamalifaliana ny manampahefana shinoa ilay Lokan’ny Fandriampahalemana Confucius mampiady hevitra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Novambra 2015 13:07 GMT
Ny filoha Shinoa Xi Jinping nandray ny filohan'i Zimbabwe nandritra ny fitsidihana tamin'ny aogositra 2014. Sary avy amin'i Xinhua.
Raha nahazo ny Loka Confucius Fandriampahalemana ny filohan'i Zimbabwe, Robert Mugabe, tamin'ny tapaky ny volana Septambra, dia nihomehy tamin'ny hevitry ny voambolana “fandriampahalemana” ampiraisina amin'ny mpitarika iray jeren'izao tontolo izao ho mpanao didijadona, ny mpikatroky ny zon'olombelona, indrindra fa ireo miasa aty amin'ny kaontinanta Afrikana.
Ny sasany mihevitra ny loka ho fikasan'i Shina hampiasa ilay Shinoa mpieritreritra fahagola Conficius hanamarinana ny fomba fitantanana tsirefesimandidy ataony amin'ny alalan'ny fampiraisana azy amin'ny endika fantadaza tahaka an'i Mugabe izay teo amin'ny fahefana nandritra ny 35 taona.
Tsy mandray anjara intsony amin'ny fanomezan-doka anefa ny governemanta Shinoa, ary na eo aza ny ezaky ny fitondram-panjakana, dia mbola maro ny tsy miraharaha na tsy mino izany.
Natsangan'ny komity iray miankina amin'ny Fikambanan'ny Zavakanto Shinoa Teratany eo ambany fanarahamason'ny Minisitera Shinoa misahana ny Kolontsaina tamin'ny 2010 rehefa nahazo ny Loka Nobel Fandriampahalemana i Liu Xiaobo, Shinoa mpanohitra sy mpikatroky ny demaokrasia mbola any am-ponja, ny Loka Confucius Fandriampahalemana. Ny Loka Confucius voalohany dia natolotra ilay politisiana avy ao Taiwan antsoina hoe Lien Chan tamin'ny fandraisany anjara ho amin'ny fifampiresahana milamina eo amin'i Shina Tanibe sy i Taiwan.
Tamin'ny 2011, ny komitin'ny loka dia nosoratana anarana ho fikambanana mahaleotena, Ny Foibem-Pianarana Fandriampahalemana Iraisampirenena ao Shina, ao Hong Kong, ary nanome loka ny Praiminisitra Rosiana Vladimir Putin, izay niteraka fifandirankevitra mafana.
Tamin'ny fanomezan-doka tamin'ity taona ity dia nahazo vahana i Mugabe, 91 taona, manoloana ny mpanorina ny Microsoft sy mpanao asasoa, Bill Gates, sy ilay filoha Koreana Tatsimo Park Geun-hye. Nilaza i Qiao Wei, filohan'ny komity mpitsara amin'ny fanolorana ny loka hoe “Mugabe dia mpitarika mpanorina an'i Zimbabwe ary niezaka ny hahamarintoerana ny politika sy ny toekarenan'ny firenena hatramin'ny nanorenana voalohany ny firenena. Nanome tombontsoa ho an'ny vahoakan'i Zimbabwe izy.”
Na izany aza dia notsipahany ny loka, izay mitentina manodidina ny 80.000 dolara Etazonia, rehefa fantany fa tsy misy fifandraisana ofisialy amin'ny governemanta Shinoa ilay izy, araka ny nolazain'ny gazety Zimbabweana iray ao an-toerana antsoina hoe NewsDay.
Mamafa ny tsipiky ny fahasohasoana
Nandritra ny folo taona farany dia nanitatra ny fampiasam-bolany tao Afrika tsy miafina amin'ny rehetra i Shina. Ampangaina ho miasa miaraka amin'ny mpitondra manao kolikoly sady manitsakitsaka ny zon'ny mpiasa i Shina amin'izany. Misy ireo mpanaramaso sasany mametraka fa fanomezana ara-politika ny loka — araka ny fanafintohinana nivoaka manodidina an'i Sam Pa, ilay lehilahy matanjaka indrindra eo amin'ny fanelanelanana amin'ny fifamezivezen'ny varotra eo amin'i Shina sy i Afrika, ireo Oloben'ny fandraharahana ao Hong Kong dia mifandray tendro amin'ny sampam-pitsikilovana shinoa sy ny orinasa tantanin'ny fanjakana. Tratran'ny fanasazian'i Etazonia i Pa tamin'ny 2014 noho ny filazana ho fanampiany ny fitondran'i Mugabe. Raha ny marina, ny fianakavian'i Mugabe dia manana villa mitentina 7,5 tapitrisa dolara etazonia ao Hong Kong, ary ny zanany vavy dia mpianatra ao amin'ny Oniversiten'ny tanàna amin'izao fotoana izao.
Mazava loatra fa ireo raharaha rehetra voalaza eo ambony ireo dia tsy misy fifandraisana amin'ny fomba ofisialy amin'ny governemanta Shinoa, tahaka ny Loka Confucius, ary misoratra anarana ao Hong Kong ny vondrona “Queensway” an'i Pa.
Raha avoitran'ny governemanta shinoa fa tsy misy idirany ny loka, dia tsy mitsahatra ny mandokandoka ny Lokan'ny Fandriampahalemana Confucius ny mpitondra ny feon'ny Antoko Komonista Shinoa amin'ny alalan'ny Global Times, manolotena ho sehatra fampitam-baovao voalohany hampielezana ny vaovaon'ny fanomezan-doka isan-taona. Avy amin'izany na ny mpiseraseran'ny Shina Tanibe aza dia misarita-tsaina ary mihevitra fa misy fifandraisana eo amin'ny loka sy ny antoko. Ny sasany nanontany hoe fa inona daholo ireto fitondrana tsirefesimandidy sy mpihetraketraka heverina ho “naman'ny” vahoaka Shinoa ireto?
‘Iza no miaro ny mpisoloky?’
Izay fanehoan-kevitra rehetra mitsikera ny loka dia voasivana avokoa ao amin'ny media sosialy shinoa. Rong Jian, manampahaizana ara-kolontsaina iray, mampanontany ny fahazoana mitoky ny loka raha jerena ny niavian'ny komity :
Nieritreritra aho fa hanihany ilay nanomezana lokan'ny fandriampahalemana Confucius ny filohan'i Zimbabwe Mugabe. Saingy tena izy ilay izy. Andao hojerena ireo mpitsaran'ny komity ireo. Iza no mahalala ny filoha, Qiao Damo, sy ny traikefany? Iza no mahafantatra ireo profesora hafa? Ary na dia misy aza ny Lokan'ny Zavakanto Confucius. Tahaka ny ahoana moa ny maha hafahafa azy ao Shina!
Hitahita taratra ao amin'ny sehatra Weibo mitovy amin'ny Twitter ny fahenohan-kevitra toa mankato. Nanangana fanontaniana somary mitsikera kokoa izy avy eo :
Mazava tsara ny maha mpaka tahaka ny Lokan'ny Fandriampahalemana ny Confucius. Ny hafahafa dia ny famelana ny fakon-doka sahala amin'ireny hanopa ny firenena sy ny ankamaroan'ny (nahazo) loka, ary tafiditra amin'izany i Mugabe, izay tsy nanaiky ny handray ny loka. Saingy nampiatranoina tao Shina ny fotoa-panomezana ny loka nandritra ny enin-taona. Ny mbola hafahafa manampy trotraka izany ihany koa dia raha nanontany ny fitokisana ny loka aho dia voafafa in-droa ny tsanganana nosoratako. Fa iza no miaro ny mpisoloky?
Lingxu Puzi, mpaneho hevitra an-tserasera iray malaza, maniratsira ny ‘fandraisana anjara’ nataon'i Mugabe tamin'izao tontolo izao, ary dia voasivana ihany koa izy tao amin'ny Weibo:
Nahazo ny Lokan'ny Fandriampahalemana Confucius 2015 i Muigabe filohan'i Zimbabwe, “naman'ny vahoaka Shinoa hatry ny ela. Hatramin'ny nandreseny tamin'ny fifidianana 1980, dia nihena hatramin'ny 1:$1.5 tamin'ny taona 1980 ka nankany amin'ny 35000000 miliara:$1 [tamin'ny 2015] ny sandam-bolan'ny firenena, Ny taha-pahavelomana moa dia avy amin'ny 61,22 taona [59,1 ny taha-pahavelomana tamin'ny 1980] no nijotso nankao amin'ny 37 taona ny lehilahy ary 34 taona ny vehivavy tamin'ny 2006. Ny zavatra nataony dia ny mifamotitra tanteraka tamin'ny Confucianisma. Ny hany fandraisana anjara nataony dia ny fahamana ny olan'ny vola raisina amin'ny retirety tao amin'ny firenena.
‘Mifanome hazavana ry zareo’
Tao amin'ny Twitter, ny Shinoa mpaningam-peo avy any ampitan-dranomasina He Qinglian no nino fa mitaratra ny mahax tsirefesimandidy ny governemanta Shinoa:
Ny Lokan'ny Fandriampahalemana Shinoa Confucius dia natolotra ny filohan'i Zimbabwe, ny mpanao didijadona Mugabe. Tohina ny firaisamonina iraisampirenena. Mahita ny loka ho maharikoriko ny antoko mpanohitra sy ny mpikatroky ny zon'olombelona. Fanehoan-kevitra: Mitombina amin'ny Antoko Komonista Shinoa ny manolotra ny loka ho an'i Mugabe. Tokony hanana ny endriky ny lokan'ny fandriampahalemany i Zimbabwe ka hanolotra izany amin'ny Filoha Shinoa Xi Jinping. Mifanome hazavana ry zareo.
Notondroin'i @MyDF fa manana ny tantarany amin'ny fanopana an'i Confucius ny Antoko Komonista Shinoa :
Ny fotoana farany nanopan'ny antoko an'i Confucius dia tamin'ny taona 1966, raha novakian'ny mpiambina mena ny fasan'ny taranak'i Confucius ary nanapongatra vatana dimy avy ao izy: ny taranaka faha-75 Kong Xiangke sy ny vadiny, ny taranaka faha-76 Kong Lingye sy ny vadiny ary ny vaditsindranony. Tamin'ity indray mitoraka ity ny fanopana dia ny fanomezan-doka ilay Afrikana mpanao didijadona, butcher Mugabe with the Confucius Peace Prize.
Fantatra tsara fa tao anatin'ny roapolo taona izay ny governemanta Shinoa no navitrika tamin'ny fampiroboroboana ny Confucius hanabeazana izao tontolo izao amin'ny maodely Shinoa, miavaka amin'ny fitondran'olon-tokana tahaka ny ataon'ny amperora ataon'ny antoko mitondra.
Nanangana Ivontoerana Conficius manatomotra ny 500 manerantany i Shina hatramin'ny 2004, indrindra fa any ANdrefana, ka tafiditra amin'izany i Etazonia, Canada ary i Britaina. Ireny Ivontoerana ireny no mampanakaiky kokoa ny mpianatra vahiny hianatra teny Shinoa, saingy, tsy maintsy misoroka adihevitra mety hanohintohina, tahaka ireo mpisintaka, Tibet, fihetsiketsehana demaokratika teo Tiananmen ary ny Falun Gong, sekta ara-pivavahana iray tsy ara-dalàna any Shina, ny resaka atao. Kendren'i Shina ny hanangana Ivontoerana Conficius hatramin'ny 1000 alohan'ny taona 2020.